Android 6.0.1 marshmallow, kungekudala uza kuqaphela i5 kufutshane nawe!
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo I-Android 6.0.1 Marshmallow, iza kungekudala kwiNqaku 5 kufutshane nawe!
Kwiintsuku nje ezimbalwa ezidlulileyo, i-Samsung ekugqibeleni yaqala ukutyhala uhlaziyo lwayo lwe-Android 6.0.1 Marshmallow ukuvula i-Galaxy S6, i-S6 edge, kunye nezixhobo ze-S6 edge +. Namhlanje, sifunda ukuba Qaphela abanini aba-5 baqalisile ukufumana isiziba ngokunjalo.
Uhlaziyo lusekumanqanaba alo wosana kwaye kunikwe ingxelo yokuba luyafumaneka eCambodia, ubukhulu becala ngeSamsung & apos; s Smart switch switch PC. Ukuba uziva uphelelwe ngumonde kwaye unayo iNqaku 5 N920C, ungabamba i-firmware kwiphepha le-SamMobile & apos (elidityaniswe ngezantsi) kwaye uyifake ngesandla.
I-Android 6 Marshmallow izisa ukubulawa kweempawu ezintsha, eyona nto iphambili yenkxaso yeminwe yeminwe, Imilinganiselo yefashoni , iimvume zokusebenza granular , kunye I-Google Ngoku kwiThepha . I-Samsung kunye neapos; i-TouchWiz ehlaziyiweyo iza kuza ne-intanethi ephuculweyo kunye ne-block block block.
Kukho konke ukulunga, i-Galaxy S6 kunye nabanini beNqaku 5 abanayo i-apos; abanako ukonwaba malunga nayo- iTouchWiz sele inenkxaso yesikena seminwe, ngokucacileyo esebenza kakuhle, kwaye Isamsung Umphathi weSmart I-app ilungile ekuthinteleni ii -apps zokutsala ibhetri ngasemva (into ekufuneka yenziwe yi-Android kunye neapos; imo entsha yeDoze). Iimvume zesicelo seGranular (indawo oza kuthi ukwazi ukuyinika kwaye ususe iimvume ezithile kwimeko-ngamatyala), kunye noGoogle ngoku kwiTephu (ukukhangela umxholo, ekuvumela ukuba ufumane ulwazi malunga nantoni na onayo kwiscreen sakho. Ngokubamba nje iqhosha lasekhaya), nangona kunjalo, zintsha kwiSammyverse kwaye ziya kongeza umoya womoya omtsha.
Ngoku ka Ishedyuli yohlaziyo lweSamsung kunye neapos; Kukho ezinye izixhobo ezi-4 ezifuna ukufumana iMarshmallow ngaphambi kokuphela kwe-Q1 2016. Ezi ziGalaxy S5, S5 Neo, Qaphela 4, kunye neNqaku Edge. Abanini bezi zixhobo banokuvuya ngakumbi malunga nohlaziyo oluzayo, kuba kubonakala ngathi ayizukuzisa kuphela iiGoogle kunye neeapos, amanqaku amatsha, kodwa kunye nokufaka ujongano olutsha kunye nohlaziyo lweTouchWiz kwiifowuni zabo. Kwimeko apho uyiphosile-iSamsung ikhanyise ujongano lwayo kancinci Ngo-2015, ukwenza i-Galaxy S6, i-S6 edge, i-S6 edge +, kunye ne-5 izixhobo ezininzi ze-snappier kunokuba thina silindele kwi-Sammy & apos; Sifanele sitsho, sinomdla wokwenyani wokufumanisa ukuba ujongano olufanayo luya kulahla lag kwiNqaku 4, Qaphela i-Edge, kunye neGPS S5. Ukuhlala ubukele kwaye emaphethelweni ezihlalo zethu!
Iphepha le-firmware le-SamMobile (N920C)
I-Galaxy Note 5 eqhuba i-Android 6.0.1 Marshmallow
Kwenzeka ntoni kwiakhawunti yakho kaGoogle xa usifa?
Uwucwangcisa njani umsebenzi weQA ukusuka ekuqaleni
Isamsung kunye neapos s Galaxy Tab S6 Lite embindini womqeshi uyathengiswa ngexabiso elingenakubethwa
Ukuba ifowuni yakho ayizukusebenza kwi-T-Mobile kwinyanga ezayo, unokukhetha indawo yasimahla
Idili: Gcina i-240 yeedola xa uthenga iMoto Z kunye neHasselblad True Zoom camera bund bund
Imidlalo emi-5 eyonwabisa kakhulu kwi-Android nakwi-iOS